Calrec သည် 8 NAB Show တွင် V2017 နှင့်အတူအပြည့်အဝအခိုးအငွေ့ထွက်နေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Calrec အဆိုပါ 8 NAB Show မှာ V2017 နှင့်အတူအပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုတိုင်တန်း
Calrec အဆိုပါ 8 NAB Show မှာ V2017 နှင့်အတူအပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုတိုင်တန်း
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန် - 24 ဧပြီလ 2017 - Calrec အသံ အဆိုပါ 8 မှာအတူတူသစ်ကို Brio တိုးမြှင့်မှုများနှင့်အတူခိုင်မြဲစွာက၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် V2017 software features တွေနှင့်အတူယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံများတွင်ထုတ်လွှင့်တတ်၏ NAB ပြရန်.
V8 တိုးတက်လာသော RP1 ထောက်ခံမှု, switchable 96-kHz သို့မဟုတ် 48-kHz နမူနာနှုန်းထားများနှင့် Calrec ရဲ့ AoIP interface ကိုထပ်မံပေါင်းစပ်အပါအဝင် Calrec ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအစွမ်းထက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏နံပါတ်မိတ်ဆက်။
"V8 တကယ်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်, IP ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာသူတို့ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်သို့ထုတ်လွှင့်ပံ့ပိုးသော tools တွေကိုတစ်တိုးတက်သော suite ကိုဖြစ်ပါတယ်" ဟု Dave Letson, ရောင်းအား Calrec ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုနှင့် AoIP လျှင်မြန်စွာအများအပြားများအတွက်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာနှင့်အတူ, V8 Calrec ရဲ့အသုံးပြုသူများကိုလာမယ့်ခေတ်သို့စိတ်ချလက်ချတိုးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, Higher-resolution ကိုအသံနဲ့ပေါင်းစပ်, ရှိသမျှအခြေစိုက်စခန်းရှေ့သို့သွားဖုံးလွှမ်းဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ "
ထို့အပြင်အသစ်အ V8 software ကို console ကိုဖွင့် On-board ကိုအရင်းအမြစ်များကိုရှိသမျှသည်အခြားသော network resources မှမရရှိနိုင်ဖြစ်ခွင့်ပြု, အ Hydra2 ကွန်ယက်ပေါ်တွင် Brio ပေါင်းစပ်။
Brio လည်းအချို့သောအစွမ်းထက် features အသစ်တွေကိုလက်ခံ၏။ အသုံးပြုသူများ stereo- ရဖို့နဲ့ 5.1-path ကိုယိုဖိတ်မှုခြေထောက်လက်လှမ်းနှင့်လွတ်လပ်ရေးထိန်းချုပ်မှု။ တစ်ဦးကစက္ကန့်တွန်း / Limited အသုံးပြုသူများအပင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောထိန်းချုပ်မှုပေးခြင်းသည်လည်း single- သို့မဟုတ်အားလုံးကိုလိုင်းများ, အုပ်စုများနှင့်အဓိကအပေါ် 3-band options များနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒိုင်းနမစ်အပိုင်းများတွင်အကျယ်ချဲ့ / တံခါးဝယခုအခါအမြတ်လျှော့ချရေးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမဆိုအခြား mono လမ်းကြောင်းအပေါ်အသံကနေနှိပ်ပါခံရဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ကို select sidechain အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ ducker, ပါဝင်သည်။
အားလုံးဆို DSP ယဇျပူဇျောစရာမလိုဘဲ - Brio ယခု 44.1, 48, 88.2, ဒါမှမဟုတ် 96 kHz ၏ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူလည်းမျိုးစုံနမူနာနှုန်းထားများမှာလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ Brio ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်မဆိုနမူနာမှုနှုန်းမှာတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။
"Brio ကမ္ဘာလုံးအနှံ့အကြီးအကောင်းချီးတို့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့ပြီး," Letson ကဆက်ပြောသည်။ "ဒီ features အသစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်စွမ်းရည်နောက်ထပ်င်း၏အတန်းအစားထဲတွင်သြဇာအရှိဆုံးထုတ်လွှင့် console ကိုအဖြစ် Brio ရဲ့အနေအထားကိုအားကောင်းလာစေရန်။ "
အကြောင်းအရာ Calrec အသံ Ltd. ,
Calrec အသံ သီးသန့် On-လေထုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဖော်စပ်အသံအတွက်ထူးချွန်ထံအပ်နှံသည်။
50 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုများအတွက်တစ်ဦးကထုတ်လွှင့်အထူးကု, Calrec ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အပေါ်မှီခိုဒစ်ဂျစ်တယ် consoles စတဲ့အကွာအဝေးတီထွင်ခဲ့သည်။
ပုံထဲမှာသံကိုချပြီးအဘို့, ထုတ်လွှင့် Calrec အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုထားတော်မူ၏။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် calrec.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Calrec/Calrec-Audio_Brio-for-V8.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Calrec ရဲ့အသစ် V8 ဆော့ဝဲ Hydra2 ကွန်ယက်ပေါ်တွင် Brio ပေါင်းစပ်။
အလည်အပတ် Calrec အသံ အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်, Booth C3118
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20goes%20full%20throttle%20with%20V8%20at%20the%202017%20%23NABShow%20-%20https://goo.gl/Tskldq%[အီးမေးလျ protected]
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2017 NAB ပြရန် AoIP interface ကို Brio အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Calrec အသံ NAB 2016 NAB16 ကုန်ပစ္စည်း RP1 Software များ V8 2017-04-26
ယခင်: NAB မှာ StorNext ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Veritone ရဲ့ Artificial Intelligence ပလက်ဖောင်းခင်းကျင်းပြပေးပါရန်ကွမ်တမ်
နောက်တစ်ခု: #NABShow 2017: ထုတ်လုပ်သူ Spotlight ကို: Blackmagic ဒီဇိုင်းထံမှ NAB သတင်းများ!